जानौ कलियुगमा जिबनलाई सहि बाटोमा डोरयाउने सरल उपाय -
जानौ कलियुगमा जिबनलाई सहि बाटोमा डोरयाउने सरल उपाय
२०७६, २३ जेष्ठ बिहीबार ००:२१ June 6, 2019 clickonLeaveaComment on जानौ कलियुगमा जिबनलाई सहि बाटोमा डोरयाउने सरल उपाय
आधुनिक जीवनमा सफलताको अर्थ पैसा र सुख-सुविधा संग जोडिएको छ। तपाई जति धैरै पैसा धन सम्पति कमाउनु हुन्छ तपाइ त्यतिनै नै सफल भएको मानिनुहुन्छ, अंधाधुध पैसा कमाउने होड़बाजिमा व्यक्ति यो सोचदैन कि उ बाट भौतिक दुनियाको सुख-सुविधा कमाउने चक्करमा कति पाप भएको छ। श्रीमद्भागवत गीतामा भगवान कृष्णले थुप्रै नीति सम्बन्धि उपदेश दिनुभएको छ । यसमा भनेको एक श्लोकको अनुसार, जो मनुष्य यो ४ सजिलो गर्छ काम गर्छ , उसलाई निश्चित स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ। यस्तो मनुष्यको जानि नजानि गरेको पाप कर्म माफ हुन्छ र उस्ले नर्क जानु पर्दैन। भगवान कृष्णले भनेका ति ४ काम के हुन् जानौ।
दान गर्नुको अर्थ कुनै जरूरतमंदलाइ कुनै चीज निशुल्क उपलब्ध गराउनु, जसलाई प्राप्त गर्न उ असमर्थ छ। दान गर्नु भन्दा पहिले या पछि कसैलाई दानको बारेमा भन्नु हुदैन । दानलाई सधै गुप्त राख्नु पर्दछ।
अक्सर हामिहरुको मन र दिमाग बिपरित दिसा तिर भट्किन थाल्छ र हामि अधर्मको बाटो तिर लाग्छौ।गितामा दिएको ज्ञानको अनुसार मनलाइ बशमा राख्दा अधर्म र पाप गर्ने सम्भाबना कम रहन्छ।
कलियुगमा सत्य र असत्य पता लगाउन गर्हो भैसक्यो । कसैल्ये भनेको भरमा साचो र गलत छुटाउन सकिदैन। यदि कसैले जिबनमा या भूतकालमा कुनै गलत काम गरेको छ भने,बाकि बचेको जीवनमा हमेशा सत्य बोलेर पापको प्रायश्चित गर्न सकिन्छ।
आधुनिक युगमा यस्ता ब्यत्ति धैरै कम् बचेका छन्, जो रोजाना ध्यान गर्छन्। पूजा-पाठ भगवानलाई प्रसन्न गर्न होइन कि आफ्नो लाभ र स्वार्थ पुर्तिको लागि गरिन्छ। आत्मध्यान गरेर हामि आत्मसाक्षात्कार गर्न सक्छौ। नियमित रूपले स्वच्छ मनले जप या ध्यान गर्दा भूलबस गरिएको गल्तिबाट पार पाउन सकिन्छ।
तपाईंको आजको राशीफल (बिहिबार २०७६ जेष्ठ २३) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय
निर्वाचन आयोगको अध्ययन भन्छ तत्काल विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार असम्भव
२०७५, २१ भाद्र बिहीबार ०८:४८ September 6, 2018 clickon
बास्तु टिप्स : यदि बिहे भैरहेको छैन या ढिलो भैइरकेको छ ? अपनाउनुहोस यो बास्तु टिप्स !
एशियाली खेलकूद: ब्याडमिन्टनको पुरुष टिम इभेन्ट्समा नेपाल क्वार्टर फाइनलमा
२०७५, ३ भाद्र आईतवार १३:३३ August 19, 2018 clickon